Maitiro ekudzima haptic mhinduro pane iyo iPhone 7 | IPhone nhau
Maitiro ekudzima haptic mhinduro pane iPhone 7
Vazhinji venyu muchave nerombo rakanaka rekuve neiyo nyowani iPhone 7 mumaoko enyu kubvira nezuro payakatengeswa munyika dzekutanga dzenyika. Imwe yezvinhu zvitsva izvo iwe zvaungave wakacherekedza ndiyo mhinduro kune iko kudyidzana uye kwakasiyana kutonga neiyo nyowani Taptic Injini, imwe inovandudza pane izvo zvataive tatova nazvo muma iPhone 6s. Kune avo vamusingazive parizvino, iyo Taptic Injini inotarisira kudedera muiyo iPhone, iyo kubvira payakatangwa muApple Wacth yekutanga, inogadzira mafambiro akanyatsojeka kupfuura iyo yekare vibration mota.
Apple yasarudza kuvhura API saka vagadziri vanogona kudzora mhando dzekuzevesa dzavanoda mune avo maitiro. Nekudaro, havazi mese imi munofanirwa kufarira kudedera uko kunogadzirwa neumwe neumwe mushandisi mukushandisa kwavo kwekudyidzana nesystem uye tichaenda kukuratidza maitiro ekubvisa iwo
Maitiro ekubvisa haptic mhinduro pane iPhone 7
Tichaenda ku Zvirongwa
Mukati meZvirongwa, tinoenda kuchikamu Ruzha uye Kudzika
Pazasi tichava ne chinja kumisa kana kudzima kudyidzana kwehaptic sekuda kwedu.
Iye zvino tichava nemitinhimira yakaremara yeanodzora system uye kudyidzana mune ese maapp
Ramba uchifunga kuti kuremadza iyi sarudzo Izvo hazvizoremedze kudedera kweiyo 3D Kubata kana kweinouya mafoniNezve izvi, isu tinogona kuzvibata kubva kune imwechete ruzha chikamu mune sarudzo dzatinadzo zvishoma pamusoro pebhatani kudzima haptic mhinduro dzeiyo iPhone 7 muchikamu chekudengenyeka mukati meruzha kana muSounds uye Vibrations zvishoma zvishoma.
Uye iwe, varidzi ve iPhone 7 kana 7 plus, uchaitei? Uchasiya zvidiki diki pane yako iPhone kana iwe unofarira kuti ifambe?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Maitiro ekudzima haptic mhinduro pane iPhone 7
Ini zvechokwadi ndinovasiya ini handikwanise kuenda kunopesana naEl Progreso
Edza kuramba kwemvura kweiyo iPhone 7